Indlela ukukhetha aspirator acinene izingane. Baby aspirators acinene Ikhala: Izibuyekezo
aspirator acinene izingane - idivayisi okhethekile ukuqeda ketshezi ezingadingekile kusukela itjhubhu imvuthu. Iqiniso lokuthi abantwana kuze iminyaka emithathu abakwazi vysmarkivatsya noma ungakwenzi kuya ngokugcwele. Futhi kule divayisi kusiza encane ukuphefumula ngokukhululekile, futhi umama uphiko elikhulu ukuthi ukhulula wakhe esimweni nge stuffy ekhaleni ingane. Manje siyathola yiziphi aspirators. amanani abo kanye nokubuyekeza abazali thuluzi uzobe futhi okusesihlokweni esithi.
aspirator acinene izingane kungaba izinhlobo ezilandelayo:
Izici ukusetshenziswa isipetu
Lokhu ekhaleni aspirator, eyenziwe ngendlela ingilazi zenjoloba ne abicah noma ithiphu plastic. Umgomo we operation sedivayisi enjalo simiswe ngalendlela lelandzelako: ngaphambi ukwethulwa idivayisi udinga opha emoyeni ke ngawakhamela iraba okuyingxenye wafaka ichopho endimeni acinene umntwana. Kulokhu, lo isikhwehlela beyobe behileleke esikhwameni zenjoloba.
Izinzuzo ezinjalo aspirators-imijovo siwukuthi bangamalungu ilula kakhulu ukusebenzisa, kulula ukuba babanakekele, zinjalo eyodwa engabizi kakhulu konke okungenhla. Ngaphambi kokuthenga iyunithi ezinjalo kudingeka ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile zezinto ezibonakalayo nezingokomoya ukuma ichopho. Kufanele kube athambe kahle hhayi naye waveza, ukuze singathwesi traumatize ukudlula acinene uhlala. Libuye ezifiselekayo imijovo anjalo waba limiter enhlonhlweni, ukuze ugweme isingeniso ezijulile zedivayisi.
Izici basebenzisa aspirator nge isetshenziswa
Ngokungafani lolu hlobo idivayisi kusukela kulowo odlule ukuthi lapha kukhona kwihendisethi ezengeziwe. Ukusebenzisa lolu cingo kumelwe kube njalo: ekupheleni Isigaxa ufushanisiwe ufakwa ikhala we encane, umama yena uqala imunce isikhwehlela ibe tube. Enye ekupheleni ithuluzi kuholela kwesigubhu okhethekile ovela okuyinto ashaye umama emoyeni. Lokhu aspirator kungcono kunokusebenzisa ngowokuqala, njengoba kuchaziwe ngenhla, kodwa futhi ezibizayo.
Usebenzisa idivayisi cleaner
Le yunithi isikhwehlela uvela ekhaleni, is bashiye ngumuntu ezivamile cleaner wezindlu. Igabha ibekwe ku-tube aspirator ka lisebenze ezifuywayo, bese nge suctioning amandla Umlawuli senzeka.
Electric acinene aspirator
Olunye uhlobo umshini yokususa isikhwehlela kusukela ekhaleni, okuyinto ngamabhetri. Umgomo we operation ke ukuthi ichopho kwensimbi alethwe ikhala imvuthu ke umama odlulela inkinobho ekhethekile, ngemva kwalokho ketshezi akube kusakhulunywa ngaye encane acinene ndima. Buhle le divayisi yokuthi ngaphezu ukuncela in izinhlobo eziningi kukhona umsebenzi ogelezayo nokumanzisa futhi uhlambulule.
Electric acinene aspirator izingane kuyinto eqolo, kodwa ngesikhathi esifanayo ephumelela kunazo.
The best uphiko okungukuthi kalula futhi ngokushesha kusiza ukuminyana acinene. Ukuphumelela idivayisi kuncike kanjani ukuba yingxenye yaso. Kufanele ngiphuze, isibonelo, idivayisi cleaner, ke aludingi iminyakazo ezengeziwe, ukushintshela iyunithi, umsindo ezingasetshenziswa okwesabisa izingane ezincane. aspirator Electric ngokuvamile uthola Izibuyekezo omuhle kulabo omama abasebenzisa iyunithi kancane njalo. Futhi lapho sinqamukile idivayisi esinjalo, abazali futhi babe ukusebenzisa izindlela wawushiywe yisikhathi noma abavamile iraba isibani. Nasi okubuyayo ekusetshenzisweni isipetu, futhi lokhu kuyaqondakala. Phela, zonke wesifazane ufuna ingane lihlale kahle ngangokunokwenzeka. Kodwa ngokuphazamisa nezinkinga ekusebenziseni aspirator mechanical kubangele ezidunjini ezomisiwe Izibuyekezo ezingezinhle.
Kudivayisi B Kahle WC-150, impendulo omama
Acinene aspirator izingane WC 150 lenzelwa umuntu itjhubhu elincane imvuthu yakho. Izinzuzo lolu phiko zimi kanje:
- ukuphepha okusezingeni eliphezulu nekusebenta iyunithi;
- lula ukusetshenziswa;
- kudivayisi compact - ke ngaphandle komzamo esifanelana ngesandla esisodwa, kungathatha on nemvelo, ku uhambo;
- the aspirator acinene izingane (efika Izibuyekezo ezahlukene) inikeza ithuba ukuphazamisa ingane ngokusebenzisa umsebenzi ezifana ukufakwa umculo.
Abaningi bathi ukusebenza kwawo ngempumelelo - uketshezi kungabikho izinkinga ephuma ndima womntwana acinene. Futhi eziningi okubuyayo mayelana lokuthi iyunithi abangayithola emazwini obucayi imvuthuluka amakilasi ezifana ne umculo bomdabu. Lona umqondo omkhulu, yikuphi okuthanda kakhulu abazali abaningi. Futhi omunye umbandela ezibalulekile uhlala intengo: a aspirator acinene ingane electric nozakwabo eshibhile.
Nokho, kukhona okuhlaziya ezimbi, okuyinto ungaboniswa kanje: izingxenye ithuluzi ngobugebengu ngokushesha, iphunga plastic ezishibhile. Kodwa la maphuzu zisobala ngempela: abantu nje abe impahla engaphephile, nokujaha ngentengo ephansi. Futhi lolu phiko - B Nokho, izingane aspirator acinene, kwakukuhle ngempela futhi wakhonza isikhathi eside, ngaphambi kokuthenga udinga uzijwayeze isitifiketi lo mkhiqizo, hlola izinga Yakha, ukuthola ngubani umkhiqizi. Uma unokungaba zakradutsya, kungcono ukuthatha kule divayisi ezingabazisayo, funa esinye, asezingeni elifanele.
Intengo lolu hlobo aspirator endiza eduze 4000-4200 ruble.
Idivayisi Baby Vac, imicabango yabantu abazali
Le divayisi uhlukile ukuthi ulungisa ngokwayo futhi kunciphisa ingcindezi emsebenzini. I aspirator acinene izingane Baby Vac isebenza nge-vacuum cleaner lapho isikhwehlela lususwe kusukela ekhaleni uhlala.
High-ukusebenza - ongayifinyelela yalokho emasekhondini ambalwa;
It akufaki kungenzeka ekulimazeni ekhaleni, kusukela kumiswa umlomo wombhobho is ukuze umama akusho ukulimaza umntwana;
akukho contact ngomlomo kamama, ngoba kunciphisa ingozi cross-ukutheleleka unina womntwana;
idivayisi wenziwe onensika izinga plastic, oqinisekisa idivayisi yezokuphepha, futhi likuvumela ukulawula wokuqhuba isikhwehlela ngokusebenzisa tube esobala;
kudivayisi akudingi ukuthengwa kumadivayisi angeziwe (amabhethri, amashubhu), aspirator ephelele has ezimbili esikhiphekayo umlomo wombhobho esebenza;
wenza Insimbi Hungary, hhayi e-China, ngakho ikhwalithi embi izinto siqedwa.
Izibuyekezo abazali mayelana Baby Vac aspirator cishe zonke ezinhle. Umama uthi lula ukusetshenziswa umfuziselo ezifana ukuthi ngokushesha aqede itjhubhu ka isikhwehlela ezingadingekile, ayinakho nephunga abuhlungu plastic. A Ububi abanye abazali bazizwa umsindo emsebenzini, kodwa kakhulu aspirator futhi vacuum cleaner ukuthi likhipha umsindo elikhulu lapho ivuliwe. Lena, mhlawumbe, caveat kuphela, eveza ukunakwa abadala.
Hand acinene aspirator izingane, ogama intengo zingahluka kusuka ruble 100 kuya ku-300 kuyinto isabelomali kule divayisi uyakwazi ecacile amavesi acinene ingane isikhwehlela.
Ngokulandela engabizi isipetu iyunithi ohlwini iza isetshenziswa, okuyinto izindleko isilinganiso ruble 400-600 (kuye ngokuthi umenzi).
Endaweni yesithathu ku-degree of zibiza kuwufanele cleaner iyunithi, elisebenza ngayo-vacuum cleaner. Inani aspirator yalolu hlobo - esifundeni ruble 800-1000.
Eqolo futhi ubhekwa ngempumelelo kudivayisi kagesi ezisebenza amabhethri. Izindleko isilinganiso aspirator acinene - ngaphakathi ruble 3000-5000, kuye umenzi.
Acinene Aspirator izingane kuphela ukuba 'eyasetshenziswa endabeni lapho isikhwehlela ngokwako akusona ziyabonisa futhi.
Uma njalo ukusula ekhaleni yile divayisi, kungaholela ukuphazamiseka le mucosa, ke desiccation kanye nokulahlekelwa izakhiwo zokuzivikela.
Uma rhinitis akuyona viral, futhi negazi lakho, leli thuluzi kufanele kuthathelwe indawo imithi eminye esebenza ngempumelelo imvelaphi antihistamine, uya khona wezingane.
Uma isikhwehlela inqubo okuningi kufanele kwenziwe izikhathi eziningana ngosuku, kangangokuthi uketshezi oluhamba kwaphuma masinyane, futhi ingane uzizwe kangcono. Ngemva isifiso, sidinga iconsa ku ikhala ngalinye ingane vasoconstrictor lehla, okuyinto ungasebenzisa izikhathi 3 ngosuku, kepha hhayi ngaphezulu kuka izinsuku 5, kwakungekho umlutha.
Manje uyazi ukuthi kuyinto aspirator acinene izingane futhi ngayiphi injongo idingeka. Sithole ukuthi kukhona izinhlobo ezine kule divayisi, kakhulu isabelomali inketho eyodwa iyona isipetu, futhi eqolo - idivayisi electronic. Naphezu umehluko intengo, akukho Izibuyekezo categorical ezimbi ngalokhu iyunithi njengenhlangano aspirator. Kunoma ikuphi kungcono ukuthenga ngisho isibani eshibhile uyakwazi okukhipha ezinhle ketshezi, kunokuba shiya ingane nge umlomo wombhobho ivimbekile.
Khetha analog "Sylvania Umndeni". Quality amathoyizi ngentengo okungabizi
Izesekeli Superb. Isiqeshana amakhethini